Ubungcali obuphezulu be-15 bee-NGO kubafundi abahluphekileyo
Funda kwelinye ilizwe kwiZizwe
Novemba 27, 2021 Chima Godswill
Kweli phepha, uyakufumana ezona mfundo zibalaseleyo zabafundi abahlwempuzekileyo ezidweliswe ukunceda uninzi lwabafundi abangakwaziyo ukulandela okanye ukuqhubela phambili amaphupha abo emfundo kunye nomsebenzi ngenxa yokunqongophala kwemali.
Ixabiso eliphezulu lemfundo lenze kwaba nzima kubafundi abaninzi kwihlabathi liphela ukuba bafunde kwiziko lemfundo. Kwelinye icala, abanye abafundi baya kufikelela ekubolekeni imali-mboleko yabafundi kwaye ke baba sematyaleni.
Abafundi abangenazo iindlela zokufumana imboleko mali yokufunda okanye bade bahlawule bayeke ukuphuma esikolweni. Kungenxa yezi zizathu ukuba iMibutho engekho phantsi kukaRhulumente ephezulu kwihlabathi lonke ithathe uxanduva lwabo lokunceda abafundi abahluphekileyo abasenomdla wokufunda.
Yiyo loo nto eli nqaku liza kudwelisa izifundiswa eziphezulu ze-NGO zabafundi abahlwempuzekileyo kwihlabathi liphela.
1 Ngaba zikho i-100% ye-NGO yokufunda?
2 Ndingasifumana njani isibonelelo se-NGO?
3 Ubungcali bee-NGO eziphezulu kubafundi abahluphekileyo
3.1 Isiseko seS Wells Mountain Scholarship
3.2 Isifundo seGoogle ICT
3.3 Erasmus Mundus Scholarships
3.4 I-KULeuven IRO Scholarship
3.5 I-Aga Khan Foundation International Scholarship
3.6 Isiseko seForte Scholarship
3.7 Ulwabiwo lweAlfa Delta Kappa
3.8 U-Anne van den Ban Fund Scholarship
3.9 INkqubo ye-Scholarship ye-CANADA-HOPE
3.10 UChristine Bolt Scholarship
3.11 UEric Bleumink Fund Scholarship
3.12 IHonjo International Scholarship Foundation
3.13 UMargaret McNamara Memorial Fund Scholarship
3.14 Isiseko se-Mo Ibrahim GDAI Ph.D. Ulwabiwo-mali
3.15 I ngcebiso
Ngaba zikho i-100% ye-NGO yokufunda?
Ewe. Zininzi izibonelelo zemfundo ze-NGO ezifumanekayo ezifumanekayo kubafundi ukuze balandele naliphi na inqanaba lokukhetha kwabo kumaziko emfundo ephezulu kwihlabathi liphela. Unokufumana ezinye zeengxowa-mali ezipheleleyo ze-NGO kweli nqaku.
Ndingasifumana njani isibonelelo se-NGO?
Ukuphumelela i-NGO yokufunda kufana nokuphumelela zonke ezinye izifundi. Konke okufuneka ukwenze kukuhlangabezana neemfuno zokufaneleka kwabo bonke abafundi be-NGO kubafundi abahluphekileyo kwaye uthumele izicelo zakho ngaphambi komhla wokugqibela.
Emva koko, kuya kufuneka uqiniseke ukuba ujonga ii-imeyile kunye newebhusayithi yakho yokufunda rhoqo ukuze wazi ukuba amagama abamkeli aza kupapashwa nini.
Ubungcali bee-NGO eziphezulu kubafundi abahluphekileyo
Apha ngezantsi kukho izifundiswa eziphezulu ze-NGO zabafundi abahlwempuzekileyo kwihlabathi liphela:
Isiseko seS Wells Mountain Scholarship
Isifundo seGoogle ICT
I-KULeuven IRO Scholarship
Ulwabiwo lwezeMpilo kwiHlabathi liphela
I-Aga Khan Foundation International Scholarship
Isiseko seForte Scholarship
Ulwabiwo lweAlfa Delta Kappa
U-Anne van den Ban Fund Scholarship
INkqubo ye-Scholarship ye-CANADA-HOPE
UChristine Bolt Scholarship
UEric Bleumink Fund Scholarship
IHonjo International Scholarship Foundation
UMargaret McNamara Memorial Fund Scholarship
Mo Ibrahim GDAI i-Ph.D. Ulwabiwo-mali
I-Wells Mountain Foundation ibonelela ngezifundo ezininzi zokuba abafundi baqhubeke neenkqubo zesidanga kwezamayeza kunye nesayensi yezempilo, uphuhliso loluntu, umthetho, imfundo, umsebenzi wentlalo, ishishini, itekhnoloji yolwazi, ezolimo kunye nobunjineli.
Esi sibonelelo se-NGO sabafundi abahlwempuzekileyo sinikezelwa yi-Wells Mountain Foundation ngenkqubo yokuXhobisa ngezeMfundo (i-ETE).
Umyinge Ixabiso le-ETE yezifundo ze- $ 1500 ngonyaka. Ibandakanya iindleko zokufunda kunye neefizi, iincwadi, ukutya nendawo yokuhlala.
Abafakizicelo kufuneka babe ngabafundi abagqibe imfundo yabo yamabanga aphakamileyo kwaye balandela isidanga sebhatshela okanye idiploma.
Abaviwa kufuneka babe ngaphezulu kweminyaka eyi-35 ubudala
Abafakizicelo kufuneka bafunde kumazwe abo asekhaya okanye kwelinye ilizwe elisaphuhlayo
Abaxhamli abalindeleyo kuya kufuneka babhalise kwinkqubo yokufunda eluncedo kuluntu lwabo kunye / okanye kumazwe asekhaya.
Isifundo seGoogle ICT siyafumaneka kwabasetyhini ukuze sibakhuthaze babalasele kwikhompyuter nakwitekhnoloji yolwazi kwaye babe yimizekelo kunye neenkokheli ekuhlaleni.
Abamkeli kwesi sibonelelo se-NGO sabafundi abahlwempuzekileyo baya kuvela ngokusekwe kwimvelaphi yabo yezemfundo kwaye babonakalise ubunkokeli.
Ixabiso leGoogle ICT Scholarship yi- $ 10,000. Isixa esiyi- $ 1,000 siya kunikwa umntu ngamnye wokugqibela wokugqibela.
Abafakizicelo kufuneka babe kunyaka wabo wokugqibela kwisidanga sokuqala okanye babhalise kwinkqubo yesidanga sokuqala iyunivesithi e-US.
Abaviwa kuya kufuneka baphumelele kwiNzululwazi yeKhompyuter, kwiNjineli yeKhompyuter, okanye kuyo nayiphi na inkalo yezobugcisa enxulumene noko.
Abaza kuzuza amabhaso kufuneka babhalise kwisifundo ngokusisigxina.
Abafaki-sicelo kufuneka babe ne-GPA encinci ye-3.5 kwisikali se-4.0 okanye i-4.5 kwisikali se-5.0.
I-Erasmus Mundus Joint Scholarship iyafumaneka kubafundi abavela kuzo zombini i-EU kunye namazwe angengawo e-EU bezokulandela iinkqubo zesidanga sokuqala. Esi sibonelelo se-NGO sabafundi abahlwempuzekileyo sixhaswa ngemali yi-European Union.
Ixabiso lenkqubo ye-EMJMD ibandakanya igalelo kwiindleko zokuthatha inxaxheba kwabafundi (kubandakanya iifizi zezifundo kunye nokugubungela i-inshurensi epheleleyo), igalelo ekuhambeni kwabafundi nakwiindleko zokufaka, kunye nesibonelelo senyanga ngalo lonke ixesha lenkqubo.
Abaviwa kuya kufuneka babe ngabafundi nakweyiphi na indawo yehlabathi enqwenela ukulandela inkqubo yesidanga sokuqala
Abafake izicelo kufuneka baqinisekise indawo kwinkqubo yesidanga ngaphambi kokufaka isicelo
I-KULeuven IRO ibonelela ngezifundo minyaka le kubafundi ababalaseleyo abavela kumazwe asaphuhlayo ukuba benze izifundo zobugqirha okanye zaphambi kobugqirha eLU Leuven, eBelgium.
Abamkeli banesithuba seminyaka emihlanu (5) ubuninzi bonwabele isifundi; unyaka omnye (1) wangaphambi kobugqirha kunye neminyaka emine (4) yobugqirha.
Esi sibonelelo se-NGO sabafundi abahlwempuzekileyo sinokuhlaziywa minyaka le kuxhomekeke kuvavanyo lwabaphumeleleyo minyaka le.
Abaviwa kuya kufuneka babe ngabemi belizwe elisaphuhlayo elaziwayo kuluhlu lwe-OECD-DAC.
Abafaki zicelo mabangabi ngaphezu kweminyaka engama-35 ubudala.
Abaza kuzuza amabhaso kufuneka babe neziphumo ezibalaseleyo zemfundo.
I-Aga Khan Foundation ngumbutho wamazwe aphesheya onika izibonelelo zokufunda kubafundi abavela kumazwe asaphuhlayo ukuba bafunde kuwo kwiiyunivesithi zaseCanada, eUnited States, eFransi nasePortugal.
Abaxhamli banokukhetha ukwenza izifundo zesidanga sokuqala kwi-Architecture, iMpilo, uMbutho woLuntu, uCwangciso noKwakha, iNkcubeko, uPhuhliso lwamaPhandle, uPhuhliso lwezoQoqosho, uNcedo lwaBantu, iMfundo kunye noMculo.
Isifundi sigubungela iindleko zokufunda kunye nokuhlala kuphela.
Abafakizicelo kufuneka bevela kwilizwe elisaphuhlayo
Abamkeli abanomdla kuya kufuneka babonise iimfuno zemali kwaye babe neerekhodi ezigqwesileyo zemfundo
Abaviwa mabangabi ngaphezu kweminyaka engama-30 ubudala
IForté Foundation yenze isibonelelo sokufundela abantu ababhinqileyo ukuze ibakhuthaze ukuba babhalise ngokusisigxina, ngokungesosigxina, okanye kwiinkqubo ze-MBA ezilawulayo eyunivesithi engaphandle.
Izibonelelo zokufunda zininzi. Ngaphandle kwenkxaso yemali enikwa abamkeli, kukho ezinye izibonelelo ezibonelelwa yiForté Foundation, kwaye zibandakanya:
Ukuthatha inxaxheba kwiNkomfa yoBunkokheli yaBafazi yeForté MBA kunye neNkomfa yeeNkonzo zeMali yeFAST Track Conference
Ukufikelela kumaqela othungelwano awodwa amaForté Fellows, iForté Fellow Alumnae, kunye neForté Fellow LinkedIn yeqela kunye namaqela eFacebook
I-e-intshayelelo ezizodwa kwiinkampani ezixhasa iForté kunye nokufakwa kwincwadi yesidanga, ehanjiswa kuzo zonke iinkampani ezixhasayo
Ubomi basimahla beForté Foundation Ubulungu bePrimiyamu ($ 50 ngonyaka)
Ingcebiso kunye namathuba okunxibelelana nabanye abathunywa kunye nabathunywa baseForté kwiziko lakho
Abafakizicelo kufuneka babonise izakhono zobunkokeli ezinamandla njengeqela okanye iinkokheli zoluntu kwaye babonise ukuzibophelela ekuncedeni abantu basetyhini ukuba baphumeze ikhono labo lomsebenzi.
Abaviwa kufuneka babe nemvelaphi eyomeleleyo yokufunda kunye nerekhodi egqwesileyo yokuphumelela kobungcali
Injongo yokunikezelwa kwamabhaso kuya kufuneka ubuncinci i-UK Second Class Honours okanye ulingana namazwe aphesheya
Abaviwa abavela kumaziko aphakamileyo kufuneka babenomyinge ophakathi ophakathi we-7/10 okanye i-60%.
Abafakizicelo abavela kwamanye amaziko amkelweyo kufuneka bafumane ubuncinci be-avareji yomyinge ukusuka kwi-7.5-8 / 10 okanye i-65-70%.
Abamkeli abanomdla kufuneka babe neminyaka emithathu ubuncinci yamava afanelekileyo omsebenzi.
I-Alpha Delta Kappa Scholarship iyafumaneka kwabasetyhini abanomdla wokufunda ngeendlela zobugcisa zaseMelika.
Abamkeli bafumana i-10,000 yeedola eya kuhlawula iindleko zemfundo yabo kwikholeji okanye eyunivesithi eUnited States. I-Alpha Delta Kappa Scholarship iyaqhubeka ukuba yenye yezona nkonzo ziphakamileyo ze-NGO zabafundi abahlwempuzekileyo kwihlabathi liphela.
Abafakizicelo kufuneka babe ngabasetyhini abangatshatanga kwaye bengaxhomekekanga kwaye kufuneka bayigcine loo meko ngexesha lokufunda
Abaviwa kufuneka babe ngabemi abangahlali base-US abahlala ngaphandle kwe-US kwaye kufuneka bagcine loo meko ngexesha lokufunda
Abafakizicelo kufuneka babe phakathi kweminyaka eyi-20 kunye ne-35 iminyaka ngaphambi komhla wokugqibela wesicelo sonyaka
Isifundi sabizwa ngegama likaGqirha Anne van den Ban owayengunjingalwazi kwiYunivesithi yaseWageningen. Inobambiswano neYunivesithi yaseWageningen.
U-Anne van den Ban Scholarship wamiselwa ukunceda abafundi abavela kumazwe asaphuhlayo kunye namazwe akuMbindi nase Mpuma Yurophu ukuba baqhubeke nesidanga kwiYunivesithi yase Wageningen.
Esi sibonelelo siphezulu se-NGO sabafundi abahluphekileyo siyafumaneka ukuze bafunde ukuze bafumane ulwazi kunye nezakhono ezifunekayo zokujongana neengxaki zelizwe labo kwimveliso yezolimo, kuphuhliso lwasemaphandleni, nakwimeko-bume.
Abaviwa kuya kufuneka bamkelwe kwisifundo sabo abasikhethileyo eWageningen
Abafakizicelo kufuneka babe neerekhodi ezigqwesileyo zemfundo kwilizwe labo
Abaviwa kufuneka bazimisele ukubuyela kwilizwe labo xa begqibile isidanga sabo
Inkxaso-mali yeCANADA-HOPE iyafumaneka kubafundi abancinci nabathembisayo kwizazinzulu nakwezonyango ezivela kumazwe aPhantsi naPhakathi (i-LMIC), njengoko kucacisiwe yiArhente yoPhuhliso lwaMazwe ngaMazwe yaseCanada (CIDA) kunye neZizwe eziManyeneyo (UN) ukubanceda funda kwezinye zeelabhoratri zesayensi kunye neendawo zoqeqesho eCanada.
Ngexesha lenkqubo, abafundi baya kufundiswa ngabaphandi abaziwayo baseCanada ukuze bafumane ulwazi kunye namava okwenza izandla ukuze benze igalelo elibonakalayo kumazwe abo asekhaya emva kokugqiba ukufunda kwabo eCanada.
Abamkeli abanomdla kufuneka babe nomcebisi kwicandelo elinxulumene neziko laseCanada kunye nenkxaso yeziko elaziwayo kumazantsi ezwekazi laseAsia (eIndiya, ePakistan, eBangladesh eSri Lanka, eNepal naseBhutan) okanye kwiAfrika eseMazantsi eSahara.
Abafakizicelo ababambe ubumi baseCanada okanye abafake isicelo sokuhlala ngokusisigxina eCanada abazukuqwalaselwa kwimfundo.
I-scholarship yasungulwa kwimemori kaChristine Ian Bolt owayenguNjingalwazi we-Emeritus weMbali kwiYunivesithi yaseKent. Ixhaswe ngumyeni wakhe u-Ian Bolt.
Iyafumaneka kubafundi bezidanga zokuqala abenza uphando ngembali yaseMelika kunye / okanye apho iziko lophando okanye umthombo wezinto ezikhoyo eMelika Ukongeza, ibhaso liya kwenza abafundi ukuba benze uphando nge-MPhil okanye i-Ph.D. ithisisi eUnited States.
Ixabiso le-scholarship yi- £ 10,000 kwaye ligubungela iindleko zokufunda kunye nezinye iindleko ngexesha lophando e-US
Abafaki-sicelo kufuneka babe ne-degree-bachelor degree (ngokukhethekileyo kwiklasi yokuqala okanye kwiklasi yesibini ephakamileyo) okanye i-degree degree (ukufaneleka okanye ukwahlula).
Abaviwa kufuneka babe nezakhono zonxibelelwano ezigqwesileyo (ezibhaliweyo nezomlomo) kwaye kufuneka bakulungele ukucacisa iprojekthi yabo ngokucacileyo ngaphandle kokusebenzisa amagama antsonkothileyo kwabo bangezizo iingcali.
Isibonelelo semali i-Eric Bleumink Fund sijolise kubafundi abanetalente kunye nososayensi abancinci abavela kumazwe asaphuhlayo ukuze baqhubeke nenkqubo yesidanga sokuqala. Kuvulelekile kuphela kubafundi abafumene (enemiqathango) yokwamkelwa ekufundeni inkqubo yenkosi ngaphambi komhla wokugqibela wesicelo semfundo.
Ukongeza, igubungela iindleko zokufunda, ukuhamba, ukutya, iincwadi, kunye neinshurensi yezempilo.
Abaviwa kufuneka babonise ukusebenza ngokugqwesileyo kwezemfundo kwaye kufuneka bavele kwiileta zabo zengcebiso
Abafakizicelo kufuneka bafumane ukwamkelwa okunemiqathango ekukhetheni inkqubo yesidanga senkosi
Abaxhamli abanomdla kufuneka babe namabanga aphezulu kwizifundo zabo zesidanga sokuqala
Abaviwa kufuneka babonise ubungqina benkxaso kwi ulwimi lwesiNgesi ngokusekwe kwiimfuno zokwamkelwa zenkqubo yokhetho
Abafakizicelo kufuneka babekhona ngalo lonke ixesha lenkqubo kwaye benze izifundo
Abaviwa akufuneki bafumane nkxaso mali kule nkqubo
I-Honjo International Scholarship ivulelekile kubafundi bamanye amazwe ukuba bafunde nayiphi na inkqubo yokuthweswa izidanga kwiziko labo laseJapan lemfundo ephezulu.
Ixabiso lebhaso lixhomekeke kubude benkqubo. Kwiinkqubo zokuthweswa izidanga ukusuka kwi-1 ukuya kwiminyaka eyi-2, abafumanayo baya kufumana i-200,000 Yen ngenyanga. Abamkeli abafunda iinkqubo zokuthweswa isidanga kunye neminyaka emithathu (3) nangaphezulu baya kufumana i-180,000 yen ngenyanga.
Kwiinkqubo zokuthweswa isidanga seminyaka emi-4 nangaphezulu, abaxhamli baya kufumana i-150,000 yen inyanga nenyanga.
Abafaki-sicelo kufuneka babhalise ukuba bafunde okanye banikwe imvume yokufunda inkqubo yokufunda emva kwe-1 ka-Epreli. Kufuneka banikezele isatifikethi sobhaliso okanye ileta yokwamkelwa.
Abaviwa ababhalisela inkqubo yesidanga se-master akufuneki babe ngaphezulu kweminyaka eyi-30 ubudala ngelixa abo babhalisela i-Ph.D. Inkqubo akufuneki ibe ngaphezulu kweminyaka eyi-35 ubudala.
Abafaki-sicelo kufuneka baqinisekise ikomiti ukuba baya kuba nakho ukufumana imisebenzi kumazwe abo asekhaya xa begqiba iinkqubo zabo zokuthweswa izidanga.
Abaviwa akufuneki babambe ubumi baseJapan.
Abafake izicelo kufuneka babonise iimfuno zemali.
Ingxowa-mali yeSikhumbuzo sikaMargaret McNamara ibonelela ngezifundo ezininzi minyaka le kubantu ababhinqileyo abavela kumazwe asaphuhlayo. Injongo ye-MMEG kukukhuthaza imfundo yaba bafundi basetyhini ukuze babe nezakhono zobunkokeli ezichaphazela ubomi babafazi nabantwana kumazwe asaphuhlayo.
Iskimu sinikezela nge- $ 15,000 kumabhaso kwabasetyhini abasuka kumazwe asaphuhlayo nakwimivuzo ephakathi. Ukugqitywa kwezifundo zabo, aba bafazi baya kubuyela kumazwe abo asekhaya okanye kwelinye ilizwe elisaphuhlayo ukuze baphucule ubomi babafazi nabantwana apho.
Abafakizicelo kufuneka babe ngabemi belizwe elidweliswe kuLuhlu lokuLunga kwelizwe le-MMMF
Injongo yokunikezelwa kwamabhaso kufuneka ibe yi-25 yeminyaka ubudala nangaphezulu ngaphambi komhla wokugqibela wesicelo
Abaviwa kufuneka babonise ukuzinikela ekusebenzeni ukuxhobisa abasetyhini kunye nabantwana kumazwe asaphuhlayo
Abafakizicelo kufuneka babhalise kwiziko elaziwayo ngaphambi kokufaka isicelo kwaye bacwangcise ukubhalisela izifundo ezizeleyo xa befumana ibhaso
Abaviwa akufuneki babe sisihlobo somsebenzi okanye iqabane elisebenza kulo naliphi na iQela leBhanki yeHlabathi, kwiNgxowa-mali yeMali yeHlabathi, okanye kwiBhanki yoPhuculo yaseMelika.
Abafakizicelo akufuneki babe ngabamkeli kuso nasiphi na isibonelelo seMMMF kwixa elidlulileyo
Isiseko se-Mo Ibrahim GDAI Ph.D. Ulwabiwo-mali
Isiseko seMo Ibrahim (MIF) sibonelela abafundi kwizifundiswa zaseAfrika minyaka le ukuze bafunde ngokusisigxina i-Ph.D. Inkqubo kuLawulo loPhuhliso e-Afrika kwiYunivesithi yaseLondon e-UK
Abagqatswa abaphumeleleyo baya kufumana i- $ 5,000 kwiminyaka 2 kunye ne-3 yenkqubo yokufunda. Isifundi siya kugubungela iindleko zokufunda iminyaka emithathu kunye neendleko zokuhlala kunyaka wokuqala nowesithathu wale nkqubo kuphela. Ukongeza, amabhaso aya kubandakanya amatikiti okubuyela enqwelomoya amabini (elinye kunyaka wokuqala nelinye le-viva).
Abaviwa kufuneka babe ngabemi abasisigxina kwilizwe laseAfrika
Abafakizicelo abangabahlali kwi-Sub Saharan Africa baya kunikwa ukhetho ngakumbi
Ubungcali obuphezulu kwi-UAE yee-Expats (Abafundi bamazwe ngamazwe)
Ezona zifundo ziBalaseleyo zePost Graduate eCanada zabo bonke aBafundi
Ubungcali obuphezulu kwi-UAE yaBafundi baseIndiya
Ukufundiswa kweeNkxaso-mali ngokupheleleyo kwaBafundi beZizwe baseYurophu
Ukufundiswa kwee-NGO eNigeria kunye neemfuno zabo zokufaneleka
Iingcebiso zescholarship Ukufunda kwelinye ilizwe kunye neScholarship
Post Previous:I-13 iiyunivesithi zaseCanada ezinamaxabiso aphezulu okwamkelwa
Okulandelayo Post:Izifundo zasimahla ze-Ivy League ezikwi-Intanethi ezinesiQhagamshelo seSicelo esithe ngqo
Pingback: I-11 yezifundo zeDyunivesithi zasimahla eIreland zaBafundi beZizwe ngeZizwe 2021
yokufunda online uthi:
Juni 22, 2021 kwi-5: 47 pm
Olu lwazi lunomdla kakhulu. Izimvo ezininzi zifunyenwe kolu lwazi ukuqhuba uphando.
UJurnal Teknik uthi:
Juni 22, 2021 kwi-5: 28 pm
UMary Judy An Noda uthi:
Juni 8, 2021 kwi-5: 31 pm
Molweni nonke. Nceda ndifuna le mfundo. Kuba, oku kubalulekile kufundisiso lwam kwaye kuncede ithuba lam. Enkosi kwaye ungamoyiki uThixo
U-Okpara Francis uthi:
Juni 9, 2021 kwi-10: 02 pm
Umxholo weWordPress: Wellington ngu Umxholo.